देशमा राजनीतिक उतार चठावसँगै आम जनताको जीवन अस्तव्यस्त :: Nepal Post Dainik देशमा राजनीतिक उतार चठावसँगै आम जनताको जीवन अस्तव्यस्त | Nepal Post Dainik
देशमा राजनीतिक उतार चठावसँगै आम जनताको जीवन अस्तव्यस्त
February 5, 2021 मा प्रकाशित
विसुन देव सरदार सिरहा लहान / २३ माघ। नेपाली जनतामा आशा भरोसा टुटेको छ। पटकपटक प्रतिगमनको शिकर बनिरहेका जनता सडकमा विकासको चाहना बनिरहेका जनता सडकमा विकासको चाहना होइन बरु शान्तिको कामना गर्दै आएका छन।
हिजो जङ्गलबाट उदाएका माअोवादी शिकार बनेका जनता आज उनै कम्युनिष्ट सरकारको चंगुलमा होमिएका छन। जनता प्रतिगमन सच्याउन माग गर्दै आएका छन तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अोलीले असंवैधानिक तवरले विघटन गरेको प्रतिगमन सच्याउन मानेका छैन । विडम्बना कुर्सीको लागि लडने नेता भनाउँदाहरु आज उनै जनताको दैनिकीमा दिवाल बनी खडा भएको छ।
ज्ञानेन्द्र शाह हटाउन पनि सडक आन्दोलन गरिरहेका जनताको छातीमा गोली लागेको घाउ निको नभएको अवस्थामा फरकफरक किसिमको आन्दोलन सुरुवात गर्ने नेताहरु देशमा भयो । एउटा कम्युनिष्ट सडकमा आन्दोलन गरिरहेका छन भने अर्को लाठी चार्ज गर्न तयार छन भने लोकतन्त्र कहाँसम्म ? मधेश आन्दोलनमा मारिएका सहिदलाई सहिद घोषणा गर्न नसक्ने माधवकुमार नेपाल जस्ले हारेर पनि प्रधानमन्त्रीको पदको आशा गर्ने प्रचण्ड यतिबेला पुन मातृका प्रसाद यादव र रामचन्द्र झालाई उही मधेशी भुमिका रकताम्य परिरहेका छन। के तिनिहरुले मधेशका समस्या समाधान गर्न तयार होला त? समस्या आएपछि मधेश आउने नेताहरु आन्दोलन सफल भएपछि मधेशलाई बिर्सने पापी नेताका पछि मधेशी जनता कहिलेसम्म लागिरहने ? वास्तवमा भन्दा नेपालमा कम्युनिष्टहरुको जरुरी छैन।
देश हाक्न लागि नेपाली काङ्ग्रेस उपयुक्त ठानिन्छ । निर्दयी सरकारको रुपमा परिचित के पी शर्मा अोलीले सडकमा आर्मी घुमाउन संकटकालको घोषणा गरिएको अनुभव नेपाली जनताले महसुस गरेका छन। यदि विचार विमर्श गरिएन भने देशमा अराजकतिर बढने देखिन्छ । त्यसैले बेलामा होस्यार हुन जरुरी देखिन्छ ।